नेपालको पहिलो जनगणना कुन थियो ? सरकारी निकाय तथ्यांक विभाग भन्छ— संवत् १९६८ मा पहिलो गणना भएको हो । तर, सरकारी अड्डाले दाबी गर्ने गणनाभन्दा ५८ वर्षअघि तत्कालीन श्री ३ जंगबहादुरले काठमाडौं उपत्यका र आसपासमा व्यवस्थित जनगणना गराएका छन् । यो इतिहासको प्रामाणिक लिखतको वृत्तान्त आफैंमा कुतूहललाग्दो छ ।
नेपालको इतिहासमा कीर्तिपुर एउटा यस्तो अध्याय हो जहाँ असंख्य कथाकहानी लुकेर बसेका छन् । तिनमा कतिपय कथा साँचो, सही होलान् अथवा कतिपय उडन्ते नि होलान्— तर कीर्तिपुरमा कथाकहानी जारी छ । नेवार आमाहरूले घरको भित्ताले पनि नसुन्ने गरी कथाहरू भनिरहे ।
पाँचथरको यासोक, स्यावरूम्बा, रानीगाउँ अति सुक्खाग्रस्त क्षेत्रको रुपमा चिनिन्छ । यहाँका झन्डै १२ हजार बासिन्दाको साझा समस्या भनेको एउटै छ— खानेपानीको अभाव ।
मोहन मैनालीको ‘देखेको देश’ पढेपछि एउटा मीठो ईष्र्या लाग्यो । म नेपालका ७२ वटा जिल्ला घुमें, नेपालबाहिरका ८ वटा देशमा काम गरें । कतिपय देश नेपालजस्तै गृहयुद्धबाट गुज्रिएका, कुनै नेपालजस्तै पूर्वाधार धेरै कम भएका देश थिए । ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म ती ठाउँमा बस्दा मैले देखेका सबै कुरा यस्तै टिपोट गरेर लेखेको भए पनि दुई तीनवटा किताब त तयार भइहाल्थे होलान् । तर, त्यो बुद्धि भएन ।
४३ सय मिटर उचाइमा उभिएको गोसाइँकुण्ड सबैभन्दा प्रमुख विशेषता के हो भने प्रकृतिको यो विन्दुमा कुण्डैकुण्ड छन् । भैरव, सूर्य, दूध, सरस्वती कुण्डलगायत सुन्दर १७ कुण्डहरू आसपासमै टाँसिएर बसेका छन् ।
भारतको नेपालीभाषी बहुल क्षेत्र मानिने दार्जिलिङ र सिक्किममा सडकपेटी र गल्लीहरू जहाँतहीं भेटिन्छन् नेपाली भरियाहरू । शिरमा थोत्रो ढाका टोपी अनि काँधमा नाम्लो बोकेर बसेकाहरू धेरैअघि मुग्लानिएका नेपाली दाजुभाइ हुन् ।
हामीले आफ्नो ठाउँबाट त राम्रो गर्‍यौं । तर, अरू देशका खेलाडीले पनि त्यत्तिकै राम्रो गरेका हुन्छन् । त्यसमा अब्बल भएर पदक जित्नका लागि धेरै पक्षले प्रभाव पारेको हुन्छ । प्राविधिक पक्षमा हामी धेरै पछाडि परिसक्यौं । प्रशिक्षकहरू कति त आउटडेटेड छन् । परिवर्तित प्रविधिसँग जानकार छैनन् । त्यसले गर्दा हाम्रो स्तर जहाँको त्यहीं छ । अब यसतर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ ।
भाँडाकुँडा बन्न छाडे पनि टक्सारको ब्रान्ड अहिले पनि बिकिरहेको छ । टक्सारमा बसेर भाँडाकुँडा बनाउँदै आएका बुद्धराज शाक्य भन्छन्, ‘हामीले टक्सारे भाँडाकुँडाको माग धान्न गाह्रो भइरहेको छ, दु:खको कुरा अरू ठाउँमा टक्सारे भन्दै नाम बिक्री भइरहेको छ ।’
भदौ १६ कोसेलीमा प्रकाशित ध्रुवचन्द्र गौतमको लेख ‘उनी थिए जीएस नेपाली’ पढ्न पाउँदा खुसी लाग्यो । आजभन्दा एक सय सात वर्षअघि सन् १९११ मा जन्मेका गोपालसिंहका बारेमा छरिएर रहेका तथ्य संकलन गरी गौतमले गरेको प्रस्तुति रोचक र सूचनामूलक छ । उनै जीएस नेपालीका बारेमा थप जानकारी होस् भनेर केही तथ्य–तथ्यांक लेख्न चाहेको छु ।
नाइल नदीभन्दा लामा आइमाईका दु:ख नाप्न्या को छन् ? जो छन्/जति छन् चोलीका तुना नाप्न्या बलात्कारी छ